တရုတ်ပြည်ရဲ့ နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒကို မပြင်မခြင်းထရမ့်ကို ကမ္ဘာမှာအတော်များများက အမေရိကန်သမ္မတအဖြစ် ရှိနေစေချင်ကြမှာပါ။ – TodayZ
မနေ့ညကတည်းက ကျနော်သတင်းဖတ်ကြည့်ရာမှာ တနင်္လာနေ့ညနေဆေးရုံဆင်းမယ်လို့ပြောထားပေမယ့် အခြေအနေကိုထပ်စောင့်ကြည့်ခဲ့တာပါ။ထရမ့်က ရွေးကောက်ပွဲကမ်ပိန်းကိုမကြာခင်ပြန်လာမယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။
“Fake News only shows the Fake Polls.”
“သတင်းအတုတွေကမဲအတုတွေပြလိမ့်မယ်” လို့ ဆိုသွားပါသေးတယ်။
ဆေးရုံကအထွက်မှာ သတင်းထောက်တွေက အိမ်ဖြူတော်မှာလူဘယ်လောက်ကူးစက်ကုန်သလဲလို့မေးတာကို “Thank you very much” လို့ဖြေသွားပါတယ်။
အိမ်ဖြူတော်ရောက်တော့ လက်မထောင်ပြအပြီးမှာ အိမ်ဖြူတော်ပေါ်တီကိုပေါ်ကနေ mask ချွတ်ပြီး ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ပို့စ်တွေပေးလိုက်ပါသေးတယ်။ ပြီးတော့လက်မထောင်ပြကာ လူတွေဘက်ကိုအလေးပြုပြလိုက်ပါသေးတယ်။
Twitter မှာ တင်လိုက်သေးတဲ့စကားကတော့ …..
“#နေလို့ကောင်းမှကောင်းကွာ! ကိုဗစ်ကိုကြောက်မနေနဲ့၊ ကိုဗစ်ကမင်းဘဝကြီးကိုပေးပြီးအလွှမ်းမိုးမခံနဲ့၊ ထရမ့်အစိုးရလက်ထက်မှာလေ တကယ်ကောင်းတဲ့ဆေးတွေနဲ့ဆေးပညာတွေကိုဖန်တီးထားတယ်၊ ငါကွာ …. လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၂၀ ကထက်တောင်နေလို့ကောင်းနေသေးတယ်။”
သူ့စကားကိုချင့်ယုံပေါ့။ ဒါပေမယ်သမ္မတဖြစ်ချင်ရင် သူ့လို strong ဆိုတဲ့ character ရှိကိုရှိရမယ်။ မတစ်ထောင်သားသမီးကို ပျော့ပျော့နဲ့အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်နေလို့မရဘူး။ ဒီလူကြီးကအတော်တော့မာတာအမှန်ပဲ။ သမ္မတလုပ်ရင်အဲ့ဒီလိုအရည်အချင်းမျိုးလိုအပ်တာအမှန်ပဲ။
မနေ့ကညကတောင် လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တုန်းက ထရမ့်က ဟီလာရီကလင်တန်ကို ရွေးကောက်ပွဲကမ်ပိန်းမှာ နောက်ပြောင်ထားတဲ့ ဗီဒီယိုလေးကြည့်လိုက်ရပါတယ်။
အဲ့ဒီ ၂၀၁၆ တုန်းက ဟီလာရီကလင်တန်က နမိုးနီးယားဖြစ်ပြီးဆေးရုံကိုပို့ခဲ့ရတာပါ။
“မှတ်ထားကွ။ သမ္မတဖြစ်ချင်ရင် Stamina ခံနိုင်ရည်ရှိရမယ်၊ သက်လုံကောင်းရမယ်။ ဟီလာရီလို ဘာတဲ့ ….. ၁၅ ပေလောက်ကွာဝေးတဲ့ ကားဆီတောင်လမ်းမလျှောက်နိုင်ပဲ ထမ်းထုတ်ရတော့ ဘယ်လို … သမ္မတလုပ်မှာလဲ … ကွာ!”ပြီးတော့ ဟီလာရီ “ဂိ” နေတဲ့ပုံကို မျက်နှာအမူအရာနဲ့တကွ ကုန်းကုန်းလုပ်ပြကာ နောက်သွားပါသေးတယ် ။
တခြားတဖက်မှာတော့ အခုလိုကိုဗစ်ဖြစ်လိုက်တာ ထရမ့်အတွက် လူတွေယုံကြည်မှုနည်းနည်းကျဆင်းသွားပါတယ်။သူ့ပြိုင်ဘက် ဂျိုးဘိုင်ဒင်က ကိုဗစ်မပြန့်ပွားအောင်ထိန်းချုပ်နိုင်ရေးဘက်ကိုပိုဖိပြောလာပါတယ်။ထရမ့်အနေနဲ့ ဆေးရုံတက်ခဲ့ရတာ ကောင်းတဲ့အလားအလာတော့ မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။
သူ့ကိုကြိုက်သည်ဖြစ်စေမကြိုက်သည်ဖြစ်စေ ကမ္ဘာမှာ သူ့ကိုလိုအပ်တယ်လို့ ယူဆနေတဲ့လူတွေအများကြီးပါ။
[email protected] Myo Thant
” နန်းမတော်မိဘုရားခေါင်ကြီးစုဘုရားလတ် နောက်ဆုံးခရီး “